ဒလတံတား စီမံကိန်းနှင့် မလွတ်ကင်းသော အဆောက်အအုံ ဟောင်းများကို သီတင်းကျွတ်တွင် စဖျက်မည်
ဒလတံတားစီမံကိန်းနှင့်မလွတ်ကင်း သောအဆောက်အအုံဟောင်းများကို လာမည့်သီတင်းကျွတ်တွင် ဖျက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒလမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးယဉ်ထွေးက ပြောသည်။ အဆိုပါအဆောက်အအုံ ဟောင်းများမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ စာသင်ကျောင်းများနှင့်ဓမ္မာရုံဟောင်းများဖြစ်ပြီး အဆိုပါအ ဆောက်အအုံများအတွက် ဌာနဆိုင်ရာမှအစားထိုးပြန်လည်တည် ဆောက်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းအဆောက်အအုံဟောင်းများဖျက်ရန် သြဂုတ် ၃၁ ရက်က ဒလမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၌ လေလံပေးခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
Written by WYHW? SMO
စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူထံမှ ဆွဲကြိုးလု ထွက်ပြေးသူ လေးဦးကို စီစီတီဗွီမှ တစ်ဆင့် ခြေရာခံ ဖမ်းမိ
စီးပွား ရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူထံမှ ဆွဲကြိုး လုယက်ထွက်ပြေးသူ လေးဦးကို စီစီတီဗွီမှတစ်ဆင့် ခြေရာခံဖမ်း ဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်၊ ညနေ ၅နာရီ ၁၅မိနစ်ခန့်တွင် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသူ မ-----သည် လှိုင်မြို့ နယ် (၁၂)ရပ်ကွက် ရွှေဟင်္သာလမ်း အတိုင်းစာကျက်ပြီးပြန်လာစဉ် လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ ဂန္ဓမာဆောင် ရှေ့အနီးအရောက် အမည်မသိလူငယ်နှစ်ဦးက နောက်မှလိုက်လာပြီး မ----ဝတ်ဆင်ထားသော ဆွဲကြိုးအားလုယက်ဖြတ်ယူခဲ့ကြောင်း၊ မ--- ကပြန်လည်ဆွဲယူခဲ့သဖြင့် ဆွဲကြိုးပါသွားခြင်းမရှိသော်လည်း တန်ဖိုး ကျပ် ၁၅ဝဝဝဝ ရှိ ရွှေဆွဲသီးပါသွား ကြောင်း၊ လုယက်သူနှစ်ဦးသည်အသင့်စောင့်နေသော Probox အဖြူ ရောင်တက္ကစီယာဉ်ပေါ်တက်၍ မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးထံမှ သိရသည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် အမုန်းတရား ဖြန့်ဝေနေသူများမှာ ပညာတတ် ဆိုသူများဖြစ်၊ လူငယ်များ ချင့်ယုံကြရန် ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် တိုက်တွန်း
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် အမုန်းစကားဖြန့်ဝေ နေသူများမှာ ပညာတတ်ဆိုသူများ ဖြစ်ပြီး လူငယ်များချင့်ယုံကြရန် ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်က တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ MICT Park တွင်ကျင်း ပသည့်''Myanmar Commnity Under The Social Media Challenges Forum ''တွင် ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်က အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Written by MLH
မြန်မာနိုင်ငံမှ အလှူရှင်များ နီပေါနိုင်ငံ၊ ပေါက္ခရမြို့ရှိ ဓမ္မသီလကျောင်းတိုက်တွင် ကထိန်သင်္ကန်း ကပ်လှူမည်ဖြစ်၍ ပါဝင်လှူဒါန်း ကုသိုလ်ပြုနိုင်
နီပေါ နိုင်ငံ၊ ပေါက္ခရမြို့ရှိ ဓမ္မသီလကျောင်းတိုက်တွင် အောက်တိုဘာ ၁ဝ ရက် နေ့၌ ကထိန်ခင်းလှူမည်ဖြစ်ရာ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုသိုလ်ရှင်များပါဝင် လှူဒါန်းကုသိုလ်ပြုနိုင်ကြောင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာ မာဂဓတက္ကသိုလ်ရှိ ဗုဒ္ဓစာပေသင်ကြားရေးဌာနမှ တွဲဖက်ပါမောက္ခဒေါက်တာစောထွဋ် စန္ဒာ(Ph.D/D. Litt) ကပြောကြား သည်။